प्रमको छिमेकी देश भ्रमण : कूटनीति कि कर्मकाण्ड ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण प्रमको छिमेकी देश भ्रमण : कूटनीति कि कर्मकाण्ड ?
लेख | दृष्टिकोण 191 views
प्रमको छिमेकी देश भ्रमण : कूटनीति कि कर्मकाण्ड ?
२ वर्षअघि नेपालको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीको पहिलो भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी नहुँदा पनि असन्तोष र आलोचनाको विषय बनेन । भारतलाई नाकाबन्दी हटाउन लगाएर भ्रमणमा गएका ओलीले देखाएको ‘राष्ट्रियता’को अडान मात्र पनि पर्याप्त उपलब्धि ठानियो । अहिले शक्तिशाली प्रधानन्त्रीको रूपमा भारत गएका ओली र उस्तै हैसियतका भारतीय समकक्षीको संयुक्त वक्तव्यमा अनेक कोणबाट टीकाटिप्पणी भइराखेको छ, किन ? यसलाई आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको उत्कट अभिलाषाको स्वाभाविक प्रतिक्रिया मान्नुपर्छ । प्रकारान्तरले यो राजनीतिलाई देखाएर आर्थिक विकासको उत्तरदायित्व र उपायबाट नपन्छिन नेतृत्वलाई खबरदारी पनि हो ।
एजेण्डाको ओज :
प्रधानमन्त्रमन्त्रीको यस पटकको भारत दौडाहालाई विगतझैं सद्भाव भ्रमणको आवरण दिइए पनि त्यस क्रममा उठाइने एजेण्डामा बहस हुँदै नभएको होइन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एजेण्डाको फेहरिस्त पेश गरेकै हुन् । यसअर्थ, ती योजनामा उपलब्धिको तथ्यलाई कार्पेटमुनि लुकाएर भ्रमणको महिमामण्डन आत्मरति मात्र हुनेछ । समृद्धिको मूल स्रोत मानिएको जलविद्युत्को उत्पादन र बजारसँग सरोकार राख्ने एजेण्डा प्राथमिकताका अग्रभागमा राखिए पनि विषयप्रवेश नै नभएजस्तो देखियो । बरु, एजेण्डाबाहिरका योजना संयुक्त वक्तव्यमा देखा परे । २२ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जान नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा व्यापार सम्झौता र भारतले ल्याएको ऊर्जा व्यापार निर्देशिकालगायत नेपालका निम्ति बहुआयामिक सरोकारका विषय ओझेलमा परे/पारिए ।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, निर्धारित समयसीमाभन्दा ६ वर्ष ढिलो गरी वीरगञ्जमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकीको स्वीच थिच्ने र निर्माणको काम अघि बढिसकेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको शिलान्यासमा सीमित भयो । प्रधामन्त्री दिल्ली पुगेको भोलिपल्ट ‘चिनियाँ लगानीमा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने’ समाचार त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा आए । भारतले ल्याएको विद्युत् खरीद निर्देशिकाको प्रावधानले नेपालको विद्युत् व्यापारलाई पार्न सक्ने सम्भावित अप्ठेरोबारे आर्थिक अभियान दैनिकमा २ वर्षअघि नै मेरो आलेख प्रकाशित भइसकेको छ । निर्देशिकामा नेपाल मात्र होइन, कुनै पनि देशबाट विद्युत् खरीदका निम्ति त्यस्ता योजनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीको शर्त समावेश छ । चिनियाँ मात्र नभई नेपालको विद्युत् उत्पादनमा अन्य सबैखाले लगानीलाई रोक्न खोजेको प्रस्टै छ । बिजुली व्यापारको तानाबाना बुनेर नथाक्ने हाम्रो राजनीतिले यो विषयलाई अहिलेसम्म भारतसमक्ष सशक्त तरिकाले उठाउनसमेत आवश्यक नठान्नुचाहिँ बुझिनसक्नु छ ।
उपलब्धिका अन्तरवस्तु :
१२ बुँदे वक्तव्यमा समेटिएका जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषिमा नयाँ साझेदारीलाई प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको यथार्थ उपलब्धि मानेका छन् । जलमार्गबाहेक अन्य एजेण्डा भारतीय रुचिका हुन् । नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने अवधारणा नयाँ होइन । तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा २०२६ सालमै पानीजहाजसम्बन्धी ऐननियम बनेका थिए । सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिएको थियो । रणनीतिक महŒवको उद्देश्य ओझेलमा पारियो । केपी ओलीले यसलाई ब्युँताउने काम गरे । भारतले विश्व बैङ्कको ऋण साझेदारीमा सागरमाला परियोजनाअन्तर्गत गङ्गानदीमा हल्दियाबाट पटनासम्म जलमार्ग विस्तार गरिराखेको छ । यसैवर्ष सम्पन्न हुने परियोजनाको प्रयोजन नेपालका निम्ति सहज हुन सक्नेमा आशङ्का छैन । समझदारीको कार्यान्वयनमा तदारुकताको खाँचो भने पर्दछ । द्विपक्षीय सन्धि÷सम्झौतामा त उदासीनता देखिएको दृश्यावलीमा संयुक्त वक्तव्य नामको समझदारीमा यतिखेर आशावादी मात्र बन्न सकिन्छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई गति दिने विषय बोकेर गएका प्रधानमन्त्री रक्सौल–काठमाडौं रेल योजना उपहार लिएर फर्किए । पूर्वाधारको विकास र विस्तारका आयाम आफैंमा सकारात्मक हुन् । दिनेको अभीष्टको परख गर्न भने जान्नु पर्दछ । काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने चिनियाँ योजनालाई टक्कर दिन भारतले यो रणनीति अघि सारेको समाचार मूलधारका भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध रहेको देश नेपालका अधिकांश भान्छा भारतबाट आयातीत खाद्यान्नको भरमा चलेको छ । वर्षेनि २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त चामल मात्र आयात हुन्छ । यतिसम्म कि स्वदेशी उद्योगले आफ्नो बोरामा भारतीय चामल भरेर उद्यम धानेका उदाहरणको कमी छैन । यसमा भारतीय नीतिकै प्रत्यक्ष/परोक्ष भरथेग छ । यो यथार्थको अगाडि कृषिमा साझेदारीको आयाम परनिर्भरताको खाडल गहिर्‍याउने औजार बन्नु हुँदैन ।
स्वार्थका पहेली :
विद्युत् विकासमा भारतीय आनाकानी र ढिलासुस्तीको आलोकमा मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण ऊर्जामा भारतमाथि अति निर्भरताको हतियार बन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । पाइपलाइन बनाइदिएको बदलामा नेपालले १५ वर्षसम्म भारतबाहेक अन्य देशबाट पेट्रोलियम किन्न नपाउने शर्त यसको प्रस्थानबिन्दु हो । हाम्रै नीति र निर्णयले यो उद्देश्यलाई बल पुर्‍याइराखेको भान हुन्छ । चीनसित पेट्रोलियम खरीद र आयातमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका अवरोधलाई यसैको पूर्वाधार नमान्नुपर्ने कारण छैन ।
भारतले १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता ओगटेर व्यापार निर्देशिकाको अत्तो थापिराखेको तथ्यबीच सन् २०३५ सम्ममा भारतलाई नै ३५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने बनिबनाउ योजनामा मक्ख छौं । त्यतिले नपुगेर त्यसको १० वर्षभित्रै विद्युत्बाटै वर्षेनि १० खर्ब रुपैयाँ कमाउने सपना हुर्काइएको छ । तर, अध्याँरो समाधानकै लागि आधाभन्दा बढी बिजुली भारतबाटै ल्याइएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारतले आफ्नो हितलाई अग्रभागमा राख्नु अस्वाभाविक होइन । नेपाललाई प्रभावमुनि राख्न आफूमा निर्भर बनाउन खोज्नु यसैको उपज हो । हाम्रो आर्थिक कूटनीति राष्ट्रिय हितमा कमजोर देखिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले म कूटनीति जान्दिनँ भनेर पातलो कुरा गर्नु शोभनीय होइन । देशको कार्यकारी प्रमुख तहलाई सकभर म नै जान्ने, नसके अनभिज्ञ बन्ने सहुलियत उपलब्ध हुँदैन । नजानेको विषयमा जानकारको सहयोग लिएरै पनि अद्यावधिक हुनु पर्दछ । कूटनीतिको आधार दरिलो बनाउने दायित्व राजनीतिकै हो ।
सतहमा देखिएको १२बुँदे वक्तव्य सीमित, तर अमुक उपलब्धि र असीमित शब्दजालको पुलिन्दाबाहेक अन्य लाग्दैन । यसलाई भ्रमण प्राप्तिका रूपमा जति बढाइचढाइ गरिए पनि प्रधानमन्त्रीले बाँकी विषयमा भारतसँग अझै गम्भीर वार्ता गर्नुपर्ने स्वीकार गरिसकेका छन् । भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानको सम्मान र पारस्परिक लाभका अधारमा छिमेकीसितको सम्बन्धलाई अघि बढाउने अभीष्ट आफैंमा स्वागतयोग्य र सराहनीय कुरा हुन् । केपी ओली यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसले आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपको डटेर प्रतिकार गरे । दक्षिणको असहयोगले उत्तर छिमेकीसित बढेको स्वाभाविक सम्बन्धलाई लिएर अहिले पनि नेपालको सत्ता राजनीतिलाई चीनपरस्त देख्ने भारतीय चस्मा फेरिएको छैन ।
नेपालको संविधानबारे भारतीय संस्थापनको तत्कालीन अडान, प्रतिक्रिया र त्यसको असरलाई लिएर भारतमै चर्को आलोचना भएपछि नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको दबाबमा देखिएकोमा थप छर्लङ्ग हुन आवश्यक छैन । यो परिदृश्यमा शाब्दिक चलखेल जे जति भए पनि एजेण्डामा उपलब्धिको सार र भ्रमणबाट भ्रम हटेको भन्ने स्वयम् प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाटै अन्तरविरोध समाधान भइनसकेको बुझ्न कठिन पर्दैन । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै दक्षिण वा उत्तर कुन छिमेकी देशको भ्रमण पहिला हुन्छ, यसले सत्ताराजनीतिमा खास अर्थ राख्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । भलै, यसको औचित्यमा बहस हुन थालिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अवश्यम्भावी छ । दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतको जगमा उभिएको सरकारलाई राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर आर्थिक समृद्धिको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । विश्वको एक नम्बर आर्थिक शक्तिको ध्याउन्नमा अघि बढेको चीन र क्षेत्रीय शक्तिमा अग्रसर भारतसितको सन्तुलित सम्बन्धको बलमा मात्रै नेपालले आर्थिक विकासको लक्ष्यमा फड्को मार्न सम्भव छ । सहयोग र अनुदानको आसक्तिबाट सम्बन्ध सम्मानजनक बन्दैन । पारस्परिक हित र सहकार्यलाई आधार बनाइनु पर्दछ । नेपालले आफूलाई कुनै छिमेकको निकट र दूरी होइन, आफ्नो विकास र समृद्धिपरस्त सावित गर्न सक्नुपर्छ । भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा वास्तविक परीक्षणको घडी सावित हुनेछ ।